CABDI-WAAL oo si cajiib ah uga hadlay ka bixitaankiisa Mudisho +COD | Wardoon Wardoon.net - Somali News
CABDI-WAAL oo si cajiib ah uga hadlay ka bixitaankiisa Mudisho +COD
Cabdi-Nuure Siyaad ‘’Cabdi-waal’’ oo la hadlay Warbaahinta Maxaliga ah ayaa waxa uu sheegay in Socdaalkii uu ku tagay Degmada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ay gacan ka geysteen Saraakiil sar sare oo ka tirsan DF.
Cabdi-waal waxa uu kashifay in Safarkiisa Guriceel ay fududeeyen Saraakiil iyo Mas’uuliyiin ka tirsan Dowlada Federaalka, waxa uuna sheegay inuu Muqdisho uga cararay baqdin kaga imaaday dhanka Laamaha Ammaanka.
‘’Safarkeyga waxaa ii fududeeyay Saraakiil ka tirsan Dowlada oo iyagu iisoo dhameeyay diyaarada iyo qaabkii aan uga bixi lahaa garoonka, waayo Muqdisho leyskuma haleyn karo haddii aysanba ka jirin nabadgalyo’’ Sidaa waxaa yiri Cabdi-waal.
Sidoo kale, Cabdi-waal waxa uu Tilmaamay inuusan diidaneyn inuu Dowlada ku wareejiyo Hubkiis, balse ay Dowladu dooneyso inay xoog ku maquuniso maadama Dastuurkuba uusan dhigeyn.
‘’Haa anigu ma diidani inaan DF ku wareejiyo Hubka aan haayo, laakiin waxan kasoo horjeeda in Hubka leygaaga qaado maquunin iyo sharci daro, waxaa loo baahan yahay in marka hore Dastuurka lagu soo daro kadib si sharci ah loo uruuriyo Hubka’’
Dhanka kale, C/waal waxa uu sheegay in DF ay dib u baarto Dastuurka kadib ay waxa ku qoran ku hagto Siyaasiyiinta iyo shacabka.